🥇 ▷ IPad 11 iyo iPhone 11 Pro waxay cadeynayaan caabidooda ku soo dhaca ✅
IPad 11 iyo iPhone 11 Pro waxay cadeynayaan caabidooda ku soo dhaca
Apple Wuxuu xooga saarey soo bandhigida moodooyinka cusub ee iPhone ee ku saabsan iska caabbinta naxdinta leh iyo biyaha oo iska caabin ah. Aad iyo aad bay u badan yihiin xitaa iyagu way leeyihiin fiidiyoow xayeysiis ah oo aad ku arki karto moodooyinka cusub ee iPhone oo dhacaya, in kasta oo ay run tahay inuusan waligiis taaban dhulka…
Caqli ahaan tani maahan saxan dhadhan fiican qof kasta sidaa darteed haddii aan runtii aan ku arki karno iska caabbinta aaladahaan fiidiyowga, in kasta oo ay dhaawaceyso, uma xumaaneyso sidii ay noogu dhacayso iPhone-keena. Sidaa darteed, dayrta ayaa tijaabisa sida tan tan loo yaqaan YouTuber, AllApplePro, Aad bay u xiiso badan yihiin.
Maaha wax ku saabsan burburinta iPhone-ka cusub ee bilaashka ah iyadoon loo baahnayn, waxay ku saabsan tahay runtii tijaabinta dhicitaanka iPhone-kaan iyo hubinta adkaysigeeda. Waxaan runtii hubnaa haddii aad rabto inaad jebiso iPhone ma ahan wax aan loo baahnayn, laakiin dhicitaan shil ah ayaa ku dhici kara qof kasta iyo daawashada fiidiyowyadan waxay noqon karaan kuwo xiiso leh inay noqdaan “xoogaa xasilloon”.
Kani waa mid ka mid ah fiidiyowyada aan ku arki karno tijaabada dhibicda dhameystiran ee moodooyinka cusub ee iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Caddee in sagxadda ciidda kaladuwan ay saameyn ku leedahay dhicitaanka oo markan ay carradu si buuxda u siman yihiin, oo aan lahayn dhagxaan ama wax la mid ah, laakiin waa caddeyn wanaagsan oo dhicitaan:
Fiidiyowgaan kale waxaan ku aragnaa moodooyinka iPhone 11:
Tijaabooyinka dhibicda ee loo sameeyay qaabkan ayaa ah mid xiiso leh maadaama ay runtii ina tusayaan heerka iska caabbinta taleefannada casriga. Sidoo kale waa inaan caddaynnaa in weerarada noocan ahi ay dhacayaan midba midka kale iyada oo aan ahayn wax runtii shil galay, sida muuqata tani waxay ina tusaysaa taas iska caabbinta moodooyinka cusub ee iPhone 11 waxay umuuqdaan kuwo runtii sarreeya daawashada fiidiyowyadan waxay si cad ugu xirnaan doontaa arrimo badan oo aanu iPhonekeenu jebinaynin markay dhacaan laakiin waxaan dhihi karnaa inay runtii adag yihiin.